Nampitaraina ny olona mipetraka eny Ankeniheny sy ny manodidina ny fisiana olona manakana sy manendaka eny an-toerana. Olona andeha hamonjy fodiana avy miasa ao amin’ny orinasa no lasibatra tamin’izany ka teo amin’ilay lalan-kely miditra eo amin’ny “Aquarel zone Forello”, mivoaka eny Ankeniheny iny no nahavoa azy. Izay olona mitsofoka any amin’ilay lalana dia iharan’ny asa ratsy avokoa, ambanan’ilay olon-dratsy amin’ny sabatra lava lela mirefy 80cm ilay olona ary alainy ny vola sy ny entana eny amin’ilay olona endrahiny. Nahazo antso ny manodidina ny Polisy mahakasika io zava-mitranga miseho eny an-toerana io ka nandray ny andraikiny avy hatrany. Natao ny velam-pandrika ka tra-tehaka teo am-panatanterahana ny ny asa ratsiny ilay olon-dratsy niaraka tamin’ilay Sabatra iray lehibe.